Bayaan ka soo baxey Shirka Digil iyo Mirifle ee Columbus Ohio Waqooyiga Mareykanka.
Columbus DMC 29 May 2007.Waxaa shir lagu soo gebagebeeyey Magaalada Columbus ee Gobolka Ohio ee carriga Mareykanka shir ay isugu yimaadeen xubno fara badan oo ka tirsan qowmiyadda Digil iyo Mirifle ee ku nool waqooyiga Mareykanka,asal ahaanna ka soo jeeday Bay,Bakool, Shabeellada Hoose,Jubbada Dhexe,Jubbada Hoose yo Gedo.
Shirka oo socday muddadii u dhexeysay 26 iyo 27 May 2007,waxaa looga doodey qodobo fara badan oo dan u ah qowmiyadda Digil iyo Mirifle,waxaana dood dheer ka dib ka soo baxey qodobada hoos ku qoran:
1. Waxaan taageereynaa Dowladda Kumeelgaarka ah ee Federaaliga Soomaaliya si loo xaqiijiyo soo celinta qarannimada ummadda Soomaaliyeed. Waxaan u aragnaa dhismaha hay�adaha dowliga ah inay tahay arrin muhiim ah oo soo celin karta nabadgelyada guud ee Dalka. Sidaas darteed waxaan ku baaqeynaa in muhiimadda kowaad la siiyo dib u soo nooleynta hay�adaha aasaasiga ah sida:
a) Wasaaradaha iyo hay�adaha hoos yimaada,
b) Xoogga Dalka Soomaaliyeed
c) Ciidammada Boliska
d) Ciidanka Asluubta iwm.
2. Waxaa muhiim ah kuna adkeynaynaa Madaxda Dowladda inay ku dhaqmaan axdiga kumeelgaarka ah ee lagu dhisay iskana ilaaliyaan ku xadgudub iyo awood sheegasho keeni karta burbur hor leh.
3. Annagoo tixgelinayna baaqyadii ka soo baxey Qarammada Midoobay iyo Ururka Midowga Afrika oo ku aaddan joogitaanka Ciidammada Ethiopia ee Soomaaliya,waxaan ku baaqeynaa in la soo dedejiyo ciidammada ay ku yabooheen Dowladaha Afrika si ay u buuxiyaan kaalinta ciidammada Ethiopia loogana hortago in uu faraha ka baxo degganaanshaha iyo wada noolaanshaha dadweynaha Soomaaliyeed.
4. In Awood qaybsiga lagu heshiiyey shirkii Dibuheshiisiinta Kenya la dhowro laguna dhaqmo layskana ilaaliyo sadbursi iyo caddaalo darro.
5. Waxaa si buuxda u taageereynaa shirka dibuheshiisiinta ee lagu baaqey,annago soo jeedinayna:
a) Inuu noqdo mid loo dhan yahay
b) Inuu isu keeno dadka wax kala tirsanayo
c) In qoraal lagu uruuriyo xadgudubyadii loo geystey dadka aan hubeysnayn,lagana bixiyo magdhawo macnawi iyo maaddiba.
6. Waxaan si buuxda u taageereynaa in dalka laga hirgeliyo hannaanka federaaliga ah,lana dedejiyo hirgelintiisa. Qofka Soomaaliga ah wuxuu xaq u leeyahay inuu ku noolaado,dego ama ka ganacsado meel kasta oo dalka Soomaaliya ka mid ah,hase yeeshee maamulka iyo talada waxaa xaq u leh dadka asal ahaan u dhashey deegaan kasta.
7. Waxaan soo dhoweyneynaa maamulka cusub ee laga dhisay gobolka Shabeellada Hoose,annagoo si buuxda u taageereyna xubnaha maamulka cusub hiil iyo hooba la garab taagan. Waxaan si kulul u cambaareynaynaa beelaha aan u dhalan gobolka oo ku doodaya inay maamulkaas qayb ku yeeshaan.
8. Ugu dambeystii waxaan Dowladda Kumeelgaarka ee Federaaliga ee Soomaaliya ugu baaqeynaa inay Jubbooyinka iyo Gedo ka hirgeliyaan maamulo ay leeyihiin dadka asal ahaan u dhashey degaanadaas.
Xubnaha qabanqaabada shirka:
1. Malaaq Muqtaar Mohamed Aadan
2. Suldaan Ibraahim Caliyow Ibrow
3. Inj Geilani Sheikh Hussein Guddiga Qabanqaabada-Ku-xig-Gud-SSU
4. Sheiknor Abukar Qaasim Guddiga Qabanqaabada-Ku-xig-Xogu-SSU
Shabakadda Warbaahinta DMC Waqooyiga Mareykanka
Maamulka Cusub ee Shabeellada Hoose iyo Xubno wasiirro iyo Xildhibaanno ka soo jeeda Gobolkaas oo maanta shir ku yeeshey Hotel Lafweyn ee magaalada Muqdisho:
Muqdisho DMC 30 May 2007. Maamulka cusub ee gobolka shabeeellada hoose iyo wasiirka arrimaha Golaha wasiirada Khaalid Cumar ayaa maanta shir ku yeeshey magaalada Muqdisho,shirkaas oo lahaa laba ujeeddo oo kala ah inay isbartaan wasiirada iyo maamulka Gobolku,iyo talo dardaaran la siinaayey maamulka cusub.
Ugu horreyntii waxaa hadalka qaatey guddoomiyaha cusub oo salaamey dhammaan xubnaha maamulkiisa iyo Wasiirka khaalid Cumar iyo xildhibaan fiqi,wuxuna sheegey inay maanta la joogaan wasiirada iyo xildhibaanada shucuubta ka soo jeedda Gobolka shabeellada hoose,kuwaas oo uu sheegey inay yihin kuwa ayaga oo dhan soo magacaabey.Waxaa dhamaan magacayadooda midmid u sheegey xubnaha Ku jira maamulka ee min degmo illaa gobol.
Ka dibna wuxuuu hadallo kooban u jeediyey xubnaha ka socda labada Gole ee DFKMGS wuxuuna u sheegey in dadka faraha badan oo fadhiya ay yihiin maamulka lex degmo oo ka tirsan shabeellada hoose,wuxuuna sheegey inay ka maqan yhiin degmooyinka Afggooye iyo wanllaweyn oo nalagu wargeliyey in maamulkooda horey loo dhisey waxna laga saxayo dhowaanna ay ku soo biiri doonaan maamulka .
Wuxuuna hadalka ku soo dhoweeyey wasiirka arrimaha Golaha wasiirada Khaalid Cumar,wuxuna xubnaha cusub uu uga warramey taariikhada uu soo marey maamulka gobolka shabeellada hoose,wuxuuna sheegey in muddo dheer laga wada hadllaayey,hase yeehee nasiibdarro noqotey in lagu heshiin waayo. wuxuu qirey in maamulkan asaaskiisa ay dhigeen Prof Saalim Caliyoow Ibroow,Prof Cabdullaahi sheekh Ismaaciil iyo Prof Maxamed Cumar Dhalxa oo ah guddoomiye ku xigeenka Baarlamaanka.
Wasiirku wuxuu maamulka kula dardaarmey inay dhaxda xirtaan oo maamulka dulkooda xajistaan wuxuuna uga digey wax la yiraahdo khilaafaad oo runtii buu yiri nasiibdarro nagu ahayd inaan annagu iskhilaafno taasna muddo dheer dib u dhigtey magacaabista maamulka Gobolkan.
Wasiirk ayaa ku nuuxnuuxsadey in Gobolkan dhaqalaha ka soo baxaya uu ku filan yahay gebi ahaan dalka soomaaliya,wuxuu xubnaha cusub ku booriyey inay si adag u shaqeeyaan illaa ay ka gaaraan in la waayo qof faqri ah oo ka soo jeeda Gobolka shabeellada Hoose.
Sidoo kale wasiirka ayaa sheegey in dhowaan maamulka cusub iyo xildhibanada ,iyo wasiirada ka soo jeeda Gobolku ka casuuman yihiin tuulada Daanyeereey ee degmada Awdheeglle,waxaana casuumaaddaas bixiyey sida wasiirku sheegey Salladdanadda Beesha Begedi ee sulddaan Buuwe.
Ka dib waxaa labada masuul ee shirka daadihinaayey saxaafaddu la yeelatey wareysyo gaaban,waxayna ku hormareen guddoomiyaha Gobolka waxa la weydiyey waxa shirku ku saabsan yahay,wuxuuna ku jawaabey inay taloooyin iyo isbarasho ay la yeeshaan wasiirada iyo xildhibaanada soo dhisey maamulkan,so�aal kale oo la weydiyey ayaa ahayd,dad degan gobolka ayaa ku doodayay inaysan maamulkaas ku qanacsaneyn taas sidee baad u aragtaa?Wuxuu ku jawaabey looma dhama,la ilama tashan,xaqdarro ayuu ahaa waa anshax xumida la bartey 16 ka sano ee aan soo dhaafney maamul kasta oo la dhisana taas ayaa lagu eedeeyaa waxaan la qabnaa dalka oo dhan marka taas wax dhib ah naguma hayso.
So�aal kale oo la weydiiyey ayaa ahayd inta idin dhaliilsan iyo inta idin taageersan ayaa badan aya la weydiiyey?wuxuu ku jawabey 99% waa na taageersan yihiin kuwa cabashada qabana waan qancineynaa marka aan Gobolka tagno.so�aal kale ayaa ahayd gobolka waxaad u tagi la� dihiin waxa la sheegaa inaad u baqeysaan ammaankiinna ma sidaas baa?Wuxuu ku jawaabey taasi xaqiiqo ma aha waxaan kuu sheegeyaa degmooyinka qaarkood waxaa durbadiiba la wareegey taageereyaasheena sida degmooyinka Qoryooleey iyo awdheeglle kuwa kale waa ku daba jiraan,waxaana sugeynaa qorshaha wasaarradda arrimaha gudaha iyo anagu ku wada shaqeyneyno ka dib si toos ah ayaan u guureynaa insha alaah.
So�aal kale oo la weydieyey ayaa ahayd waxa uga horreeya ee maamulkiisu diiradda saarayo ama uu qabanayo?wuxuu ku jawaabey wax walba waxaa ugu muhiimsan amniga waxaan culeyskeena oo dhan saari doonnaa dhinaca ammaanka,ka ddibana waxaa hormarineynnaa adeegga Bulshada sida waxbarashada,caafimaadka iyo wax soo saarka kheeyraadka dabiiciga.
So�aal kale oo la weyddiiyey ayaa ahayd inay jiraan dad badan oo hantidooda sida Guryaha Beeraha ,laga haysto xitaa intii ay jireen maamullada Carte iyo kan maxkamadaha,markaa arrintaas wax ma ka qabanayaa maamulkaagu? Wuxuu ku jawaabey oonka maxaa keeney baa la yiri waxaa keeney kuleyl waxaan ka wadaa ma jiri doonto qof hanti uu leeyahay si xoog ah lagu haysan karo,maxkamado ayaa noo furan taas ayaan kala saari doonta wax walba waxaan ku saxi doonnaa maamulkeenna.
Ka dib waxaa wareysi la yeelaney wasiirka arrimaha fidiraalka Mudane Khaalid Cumar waxana weyddiinney waxa shirkani ku saabsan yahay ? wuxuu ku jawaabey inay u hambalyeyaan maamulka cusub ee gobolka shabeellada hoose iyagoo ah wasiiro iyo xildhibaanno ka soo jeeda Gobolka,tan labaadna waxaa weeye inaan siino talo iyo guubaabo si ay maamulkooda u najaxiyaan.
So�aal kale oo aan weyddiiney ayaa ahayd maamulkan sida ka muuqata wuxuu ku fadhiyaa illaa lex degmo gobolkuna wuxuu ka kooban yahay 8 degmo maxaa labada degmo ka reebey?wuxuu ku jawaabey lexdan degmo waxay ku soo dhismeen hal wareegto,labadaas degmona horey ayaaba loo dhisey markaaa iyagana fadhiyada soo socda ayay ka soo qeybgeli doonaan.
Si kastaba ha ahaatee shirka maamulka Gobolka iyo xildhibaanada iyo wasiirada ka soo jeeda Gobolka ayaa si guul ah ku soo dhammaadey
Shabakadda warbaahinta DMNC Muqdisho